वृद्धवृद्धाको मृत्युदर बढी, बालबालिका पनि जोखिममा « Pahilo News
प्रकाशित मिति :7August, 2020 7:43 am
काठमाडौं, २३ साउन । नेपालमा हालसम्म ८० वर्ष नाघेका २५ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये २ जनाको मृत्यु भएको छ । यो ८ प्रतिशत हो । यस्तै, १० वर्षमुनिका ८ सय ५५ जना संक्रमित पाइएका छन् । तीमध्ये ३ जना (०.३५ प्रतिशत) को मृत्यु भएको छ ।
‘विश्वव्यापी प्यारामिटरमा हेर्दा बालबालिका मृत्युको यो दर निकै ठूलो हो । कोरोनाले बालबालिकालाई केही असर गर्दैन भन्ने सन्देश सुरुआती दिनमा गयो । त्यो सच्चिनु पर्छ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. सुरेश तिवारीले भने, ‘बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न अभिभावकीय कर्तव्य हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्यका दृष्टिले यो विशेष सन्देश हो ।’
वृद्धवृद्धामा भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नै न्यून हुन्छ । ‘संख्यात्मक हिसाबले २ जनाको मृत्यु भए पनि अन्य उमेरसमूहभन्दा यो उच्च मृत्युदर हो । ६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दा मानवअधिकारभन्दा पनि जनस्वास्थ्य अधिकारका दृष्टिले पनि हेरिनुपर्छ’, डा. तिवारीले भने, ‘यो उमेरसमूहमा मृत्युदर अधिक छ । सरकार र नागरिकले विशेष रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ लक्षणसहितको संक्रमितबाट वृद्धवृद्धामा रोग सर्‍यो भने त्यसले मृत्युदर अझ बढाउने उनको भनाइ छ ।
६१ वर्षमाथिको समूहमा संक्रमण न्यून देखिन्छ । तर, मृत्युदर बढी छ । ६१ देखि ७० वर्ष समूहमा ११ जनाको ज्यान गएको छ । यो समूहमा ३ सय १० जना संक्रमित छन् । यो झन्डै ३.२३ प्रतिशत हो। ७१ देखि ८० वर्षसम्मका ५ जनाको मृत्यु भएको छ । यो उमेर समूहमा ९४ जना संक्रमित छन् । मृत्युदर ३.१९ प्रतिशत हो ।
संक्रमितको संख्याका दृष्टिले ६० भन्दा कम उमेर समूहका व्यक्ति धेरै छन् । डा. तिवारीका अनुसार चलायमान उमेर समूहका व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण बढी देखिएको हो । यो समूहका व्यक्ति चलायमान हुने हुँदा संक्रमण र मृत्यु संख्यात्मक रूपमा बढी देखिएको उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट